विकास र आर्थिक समृद्धि मुख्य एजेन्डा - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
भोजपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर कैलाशकुमार आलेको जन्म वि.सं. २०३६ सालमा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा भएको हो । सानैदेखि इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ छवि बनाएका आले वि.सं. २०५१ सालमा विद्योदय मावि पढ्दा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा अध्यक्ष भएपछि पूर्ण रूपमा राजनीतिमा होमिएका हुन् । भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा वि.सं. २०५७ सालमा स्ववियु सभापति भएका कैलाशले ०७० सालमा तरुण दलको जिल्ला अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरेका थिए । हाल उनी कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सचिव हुन् ।
तपार्इंको प्राथमिकता के–के हुनेछन् ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक खानेपानी आदि विकासका महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विकास मेरो प्राथमिकतामा छन् । यो नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम भए पनि विकास र समृद्धिमा निकै पछाडि छ । सरकारमा पटक–पटक जिल्लाले नेतृत्व पाए पनि अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेको छैन । अब यो नगर जनप्रतिनिधिले पूर्ण भएको अवस्था हो । मैले चुनावी प्रचारमा बोलेका, कबुल गरेका र घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछु । म पदको कुनै हालतमा दुरुपयोग गर्नेछैन भने नगर विकासको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नेछु ।
भोजपुरलाई कस्तो सहर बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
भोजपुर जसरी पूर्वी पहाडको कर्णालीका रूपमा चिनिएको छ, अब चाँडै पूर्वी पहाडको सुविधासम्पन्न सुन्दर सहर बनाउने परिकल्पना गरेको छु । यो नगर प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक, पर्यटकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता बोकेको नगर हो । नगरका प्रत्येक बस्तीमा व्यवस्थित सड्क, एक घर एक धारा, एक घर एक बिजुली, टोलटोलमा इन्टरनेट तथा व्यवस्थित चक्रपथ आदिको व्यवस्था हुनेछ । जनतामा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको पहुँच पु¥याउनेछु । पर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय स्तरमै अर्थोपार्जनको व्यवस्था मिलाउने छु । युवाहरूलाई यही बसेर स्वरोजगार बन्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नेछु । हाम्रो नगरमा जम्मा १२ वटा वडा छन्, प्रत्येक वडामा बेड र स्वास्थ्यकर्मीसहितको स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था हुनेछ । महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्त, असहाय तथा बालबालिकालाई विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था हुनेछ । वर्षांैदेखि अधुरा, अपुरा विकासे गतिविधिहरू पूरा गर्नेछु । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुन दिनेछैन र त्यो मेरो नैतिकता पनि होइन ।
साधन–स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
विकासमा पछाडि परे पनि स्थानीय तहमा थुप्रै साधन–स्रोत छन् । भोजपुर प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी छ । तिनको परिचालन गर्नेछु । दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउन सके असम्भव भन्ने केही छैन । स्वार्थरहित ढंगले तथा आफैं स्रोत–साधन जुटाएर जनताको सपना साकार गर्नेछु ।
प्रकाशित :असार २६, २०७४